Muujinta isleeg ka 36 ilaa 40 Bogga 8 - Fadlan U Gudub Dhamaadka Si Aad U Aragto Natiijooyin Badan
Oxygen biyaha carbon dioxide
(kh) (rnn) (lng) (kh)
7 2 6 6 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 7O2 + 2C3H6O2 H 6H2O + 6CO2
Waa maxay xaalada falcelinta ee O2 (oxygen) ay kaga falceliso C3H6O2 ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo CO2 (kaarbon dioxide)?
Gubashada C3H6O2 hawada
Dhacdada ka dib O2 (oxygen) waxay la falgashaa C3H6O2 ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 7O2 + 2C3H6O2 H 6H2O + 6CO2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta C3H6O2 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee C3H6O2 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C3H6O2 () falcelin ahaan?
O2 + 4Cr (OH)2 → 4H2O + 2Cr2O3
Oxygen biyaha chromium (iii) oksaydh
(kh) (dd) (lng) (rnn)
(xoog leh) (waa) (xoog leh) (la soco)
1 4 4 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta O2 + 4Cr (OH)2 H 4H2O + 2Cr2O3
Waa maxay xaaladda falcelinta O2 (oxygen) ee ay la falgasho Cr (OH) 2 ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo Cr2O3 (chromium(iii) oxide)?
Cr (OH) 2 waxay la falgashaa oksijiin hawada ku jirta
Dhacdada O2 ka dib (oxygen) waxay la falgashaa Cr (OH) 2 ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada O2 + 4Cr (OH)2 H 4H2O + 2Cr2O3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Cr(OH)2 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Cr(OH)2 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cr (OH) 2 () falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Cr2O3 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cr2O3 (chromium(iii) oxide) alaab ahaan?
Oxygen naxaas (i) baaruud naxaas (ii) xabagta baaruud dioxide
(xoog leh) (ka) (ka) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2O2 + Cu2S → 2CuO + SO2
Waa maxay xaalada falcelinta ee O2 (oxygen) ay kula falgasho Cu2S (copper(i) sulfide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CuO (copper(ii) oxide) iyo SO2 (sulfur dioxide)?
Cu2S waxay ku falcelisaa oksijiinka
Dhacdada O2 ka dib (oxygen) waxay la falgashaa Cu2S (copper(i) sulfide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2O2 + Cu2S → 2CuO + SO2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Cu2S (copper(i) sulfide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Cu2S (copper(i) sulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cu2S (copper(i) sulfide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CuO (copper(i) sulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CuO (ii) oxide ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee SO2 (copper(i) sulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh SO2 (sulfur dioxide) alaab ahaan?
2O2 + SiH4 → 2H2O + Haa2
Oxygen Silane; Fidiyaha silikoon; Silicomethane; Monosilane; Silicane; Tetrahydridesilicon biyaha silikon dioxide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2O2 + SiH4 H 2H2O + Haa2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee O2 (oxygen) waxay la falgashaa SiH4 (Silane; Silicon hydride; Silicomethane; Monosilane; Silicane; Tetrahydridesilicon)?
Heerkulka: 150 ° C Xaaladda Kale: dab hawada ku jira
Dhacdada O2 ka dib (oxygen) waxay la falgashaa SiH4 (Silane; Silicon hydride; Silicomethane; Monosilane; Silicane; Tetrahydridesilicon)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2O2 + SiH4 H 2H2O + Haa2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta SiH4 (Silane; Silicon hydride; Silicomethane; Monosilane; Silicane, Tetrahydridesilicon)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee SiH4 (Silane; Silicon hydride; Silicomethane; Monosilane; Silicane; Tetrahydridesilicon)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh SiH4 (Silane; Silicon hydride; Silicomethane; Monosilane; Silicane; Tetrahydridesilicon) sida falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee H2O (Silane; Silicon hydride; Silicomethane; Monosilane; Silicane; Tetrahydridesilicon)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee SiO2 (Silane; Silicon hydride; Silicomethane; Monosilane; Silicane; Tetrahydridesilicon)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh SiO2 (silikon dioxide) oo ah badeecad ahaan?
fructose Oxygen biyaha carbon dioxide
(rnn) (kh) (lng) (kh)
1 6 6 6 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta C6H12O6 + 6O2 H 6H2O + 6CO2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee C6H12O6 (fructose) ay la falgasho O2 (oxygen)?
Gulukoosta waxay ku falcelisaa oksijiin
Dhacdada ka dib C6H12O6 (fructose) waxay la falgashaa O2 (oxygen)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada C6H12O6 + 6O2 H 6H2O + 6CO2
Muujinta isleeg ka 36 ilaa 40 Page 8